पूजा र प्रियंकाको काम गर्ने फरक शैली, लामो समय को टिक्लान् ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsपूजा र प्रियंकाको काम गर्ने फरक शैली, लामो समय को टिक्लान् ?
पूजा र प्रियंकाको काम गर्ने फरक शैली, लामो समय को टिक्लान् ?
September 13, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेत्री पूजा शर्माले बर्षमा एउटा मात्र फिल्म खेलेकी छिन् । उनको काम गर्ने तरिका हेर्दा बर्षमा जम्मा एउटा फिल्म रिलिज भएको छ । हलमा उनलाई हेर्न मानिस आएकापनि छन् ।
प्रेमगीत रिलिज अघिसम्म उनलाई दर्शकले नोटिस गरेका थिएनन् । चंखे शंखे पंखे, मधुमास जस्ता सिनेमा असफल भएका थिए । तर, प्रेमगीतपछि उनी यसरी हिट भइन् कि अहिले रामकहानीमा आइपुग्दा सम्म उनले ह्याट्रिक नै गरिन् । बर्षमा एकपटक मात्र आउने भएकाले पनि पूजालाई दर्शकले प्रतिक्षा गरेका छन् ।
पूजाको जस्तो काम गराई कमै मात्र नेपाली हिरोइनमा पाइन्छ । नेपालमा धेरै हिरोइन त अफर आएका सबै फिल्म गर्छन् । जस्तो अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई नै हेर्न सकिन्छ । प्रियंकाले फिल्ममा प्रवेश गरेसँगै नै अफर आएका सबै सिनेमा गरेकी छिन् । स्टाइलिस्ट हिरोइन भनेर परिचित बनेपनि उनी बक्स अफिसमा चल्न सकिनन् । बक्स अफिस उनकै नामले भिड हुँदैन । हिट ब्यानरका सिनेमामा आइटम गीत, थोरै भूमिका मात्र गरेर भएपनि प्रियंकाले आफूलाई यो क्षेत्रमा टिकाइराखेकी छिन् ।
कलाकारले धेरै सिनेमा गर्नु हुँदैन भनिन्छ । प्रियंकाको काम गराइले उनलाई अहिले व्यस्त बनाएपनि लामो समय टिकाई नराख्ने फिल्मीकर्मीहरु नै बताउँछन् । पूजा शर्माको काम गराई भने आफै बनाउने, बर्षमा एक पटक आउने नै छ । उनले अरु ब्यानरका सिनेमा अफर आएर पनि गरिनन् । हुनत, उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापा बाहेक अरुले नपत्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानीमा फरक फरक हिरो भएपनि पूजा मात्र पुरानी थिइन् । सिनेमाले राम्रो कमाई गरेको छ ।
पूजा र प्रियंकाको काम गराई फरक छ । फिल्म क्षेत्रमा पूजा जसरी काम गर्ने हिरोइन कम छन् भने प्रियंका जसरी काम गर्ने धेरै छन् । आखिर, यी दुइको तरिकाले काम गर्ने मध्ये लामो समयसम्म को टिक्लान् ?
पशुपतीमा दिपक र दीपाको ठुम्का, दिपककै अगाडि दीपाले खुलाइन् माया गर्ने मान्छेको नाम !